Ihe edemede Shannon Tucker na Martech Zone |
Edemede site na Ọnye na -bụ Shannon Tucker?
Ọnye na -bụ Shannon Tucker?
Shannon bụ ọkachamara na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze nke na-enweta ndị ahịa na akụkọ. Shannon kwenyere n'ike nke mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze site na ijikọta mgbasa ozi akwụ ụgwọ, ụgwọ, na nke ndị nwe. Shannon bu onye isi ndi Media Media na SSPR.
Monday, July 15, 2019 Monday, July 15, 2019 Ọnye na -bụ Shannon Tucker?
Kedu ihe bụ Mmetụta? Mmetụta bụ ọnụọgụ nke anya anya na akụkọ gị ma ọ bụ mgbasa ozi mgbasa ozi dabere na ndị na-agụ / ndị na-ekiri ụzọ mbata / isi iyi. Na 2019, a na-achị ọchị banyere ọnụ ụlọ. Ọ bụghị ihe ọhụrụ ịhụ mmetụta na ọtụtụ ijeri. Enwere ijeri mmadu asaa n ’uwa: ihe ruru ijeri 7 n’ime ha enweghị ọkụ eletrik, imirikiti ndị ọzọ achọghị ịma gbasara edemede gị. Ọ bụrụ na ị nwere ijeri 1 ijeri echiche ma ị pụọ